SQ: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Onkoloolessa 6, 2017 »
#OromoRevolution onkololessa 06/2017 #Gabaasa_Addaa Mootummaan Wayyaaneefi Waraanni Poolisii Liyuhayilii Somaalee ofiin jedhu wayyaaneen hoogganamu Yakka waraanaa Uummata Oromoo Bahaa Oromiyaa, Kibbaafi Kibbaa Bahaa Oromiyaa irratti gaggeessa jiruu irraa hin dhaabbatne akkuma itti fufetti jira. Sirni abbaa irree Wayyaanee TPLFn durfamuufi ergamaan Wayyaanee Abdi Illee hogganaan waraanaa liyyuu hayilii Somaalee waraana waloon uummata keenyarratti banan ammallee daran jajjabeessuun waraana itti fufinsa qabu gaggeessuuf akka jiran saaxilamee jira.
Dhiyeenya kana Mootummaan abbaa irree Wayyaanee Naannoo Somaalee Magaalaa Godeetti Abdii Elley fi General Abrham Woldamaaram Ajajaa Humna Waraana Bahaa TPLF , kan ta’ee waraana poolisoota ‘Liyuhayilii’ Soomaalee ajaja waraana wayyaaee kanaafi Abdi Illeen gaggeeffamanii yakka Waraanaa Uummata Oromoo irratti rawwatanii lubbuu hedduu galafachuun kumoota dhibbootaan kan lakka’aman qe’eefi qabeenyaa irraa kan buqqisaaniif qophii addaa qopheessee galaateeffatee jira. Suuraa fi Videon galateeffannaa yakka waraanaa uummata keenyarratti rawwatamee ibsuu marsaalee social media irraa facafamaa jiru irraa hubachuun dandahameera. Kana malees mootummaan wayyaanee gama Lixa Oromiyaa irraan Gumuuz hidhachisee uummata keenyaa akkuma ficisiisaa ture ammas Gumuuz hidhachiisee uummata Oromoo wallaggaa Lixaafi Bahaa Daangaa Gumuuz irratti argaman irratti lola bansiisuuf akka jiru saaxilamee jira.
Kanaafuu Uummatni Oromoo kan asiin duraafi ammaa Caalaatti qophiifi dammaqinsaa guddaa qabaachuun barbaachisaadha keessattuu Oromoon waan qabuu hudaan of irraa ittisuufi humna waraanaa of harkaa qabnu jabeeffachuun gabrummatti xummura gochuuf yeroo irraa gara yerootti qophiin addaan hin citne godhamuu qaba. Ilmaan Oromoo waraana Wayyaanee keessatti argamtasn yeroon gara uummataatti deebitanii uummata keessaan gaagga’ama waraanaa irraa hambistan amma. Qeerroo Bilisummaafi Uummatni Oromoo waliigalatti qabsoo keenyaa kan Xummura garbummaa cichoominaafi kutannoon bakka hundaatti waan qabsoon feesisu hundaan kan itti fufnu ta’uu hubachiifna!!